Flekosteel gel zụta n'Abuja na mbelata
Flekosteel Saịtị gọọmentị
Kesaa ihe a
Gel maka nkwonkwo na mgbu azụ
Flekosteel n'Abuja Naijiria
ịtụ ịtụ Flekosteel
Nweta enyemaka nkwonkwo mgbu nke Flekosteel n'Abuja
Gel megide nkwonkwo na mgbu azụ Flekosteel ga-eme ka mmụghachi nke anụ ahụ cartilage ngwa ngwa. Ị nwere ike nweta gel na obodo Nigeria na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọrụ ahụ. Ị nwekwara ike ịtụ nnyefe n'Abuja. Ọnụ ego mbelata bụ naanị ₦14990, nkwalite ahụ nwere oke.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ọgwụ ugbu a maka ọkara ọnụ ahịa, ị ga-emejupụta akwụkwọ nyocha na webụsaịtị ụlọ ọrụ. Jiri mpempe akwụkwọ wee tinye data maka iwu ahụ, onye njikwa anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike ịkọwapụta usoro ahụ wee hazie nnyefe na adreesị gị. Tupu ịtụ ahịa, anyị na-akwado ka ị mụọ ntuziaka maka ojiji Flekosteel. Ịkwụ ụgwọ maka ngwugwu ahụ site na ego na-ebuga onye na-ebuga ya ma ọ bụ site na mail.
Otu esi azụta n'Abuja Flekosteel
Nye iwu gel megide nkwonkwo na mgbu azụ Flekosteel n'Abuja
Ọtụtụ nwere mmasị na ebe ị nwere ike ịzụta Flekosteel gel maka nkwonkwo na azụ na ọnụ ahịa ọnụ ahịa? Enweghị ike ịchọta gel na counters nke ụlọ ahịa ọgwụ na-anọghị n'ịntanetị n'Abuja, yana na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ọgwụ. Ọ ga-ekwe omume ịzụta ọgwụ naanị na webụsaịtị gọọmentị nke onye nrụpụta, dejupụta mpempe akwụkwọ ka onye ọrụ anyị wee kpọtụrụ gị. Taa enwere mbelata, ọnụahịa ụgbọ ala bụ naanị ₦14990, ọnụ ahịa nnyefe na Abuja (na Nigeria), lelee onye ọrụ.
Ọ dị mfe iji onyinye nke onye nrụpụta:
Gaa na webụsaịtị onye nrụpụta.
Hapụ arịrịọ na webụsaịtị site na mpempe akwụkwọ iji kwado ịzụrụ gel.
Onye njikwa anyị ga-akpọtụrụ gị iji kwado iwu ahụ, onye ga-akọwa nkọwa nke iwu ahụ wee kwado adreesị nnyefe.
Ọnụahịa maka ibuga site na onye na-ebu ozi gaa na adreesị ị kpọtụrụ aha nwere ike ịdị iche dabere na obodo ahụ. Mgbe onye njikwa ahụ kpọchara, chere maka ngwugwu ahụ ma kwụọ ụgwọ ngwa ahịa mgbe ị natara ya. Mgbe ị nwetara ozi ahụ, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka iwu ahụ, ọ ga-ekwe omume iji aka ma ọ bụ kaadị kwụọ onye na-ebufe ya. Mee ngwa ngwa jiri mbelata 50% zụta. Usoro nke nkwalite dị oke. Ị nwere ike ịtụ ngwaahịa n'Abuja (Nigeria) ugbu a.
Obodo ndị ọzọ dị na Nigeria ebe ị nwere ike ịzụta Flekosteel
Obodo ndị dị na Nigeria ebe ị nwere ike ịzụrụ Flekosteel
Flekosteel na Lagos Flekosteel na Kano
Flekosteel na Port Harcourt Flekosteel na Benin City
Flekosteel na Kaduna Flekosteel na Owerri
Flekosteel na Acker Flekosteel na Warri
Flekosteel na Calabar Flekosteel na Sokoto
Flekosteel n'Enugwu Flekosteel na Jos
Flekosteel na ABA Flekosteel na Abeokuta
Flekosteel na Ajaokuta Flekosteel na Apapa
Flekosteel na Bakhit Flekosteel na Bauchi
Flekosteel na Victoria Island Flekosteel na Gusau
Flekosteel na Zaria Flekosteel n'Ibadan
Flekosteel n'Ikoyi Flekosteel na Ilorin
Flekosteel na Yaba Flekosteel na Yola
Obodo na nigeria
Nyocha banyere Flekosteel n'Abuja
Favour Sunday, 39 Afọ, Abuja
Ọnwa ole na ole gara aga, a chọpụtara na m nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo. Ka nkwonkwo ahụ ghara imerụ ahụ kpamkpam, ekpebiri m ịchọ ọgwụgwọ nke ga-enyere aka ịnagide nsogbu ahụ. Ihe ngwọta bụ Flekosteel gel. Achọrọ m ịmara na gel na-enye nsonaazụ. Ude ahụ nwere mmetụta nchịkọta, n'ihi ya, ihe mgbu adịghị alaghachi mgbe usoro ọgwụgwọ gasịrị.
Akụkọ na-atọ ụtọ
Mgbu mgbu dị ala, ihe kpatara ya, ọgwụgwọ
Ihe na-akpata mgbu azụ na ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, mgbaàmà concomitant nke ọrịa nwere ike ime. Ụzọ iji gwọọ ma wepụ ihe mgbu, ihe mgbochi.
16 Eprel 2022
Ihe mgbu azụ: ihe kpatara ya, ọgwụgwọ
Ihe na-akpata mgbu azụ: isi ihe na-akpata na mgbaàmà nke ọrịa ndị nwere ike ime. Ụzọ nkwụsị mgbu.
28 Maachị 2022
Mgbaàmà nke osteochondrosis nke spine thoracic na ọgwụgwọ ya
Osteochondrosis nke spine thoracic: akpata ọrịa, ihe ịrịba ama na mgbaàmà, ọgwụgwọ na ndị mmadụ ụzọ na ọgwụ.
7 Mee 2022
ịtụ ịtụ Flekosteel n'Abuja 50% nke ọ bụla
Tinye aha gị
Tinye ekwentị gị
Ụlọ ahịa ọgwụ
Ntuziaka maka ojiji
Saịtị gọọmentị na Nigeria
2022 © Ikike niile echekwabara